I-Leanplum: A / B Hlola Okuqukethwe Kwakho Kwamaselula Nemiyalezo | Martech Zone
NgoLwesine, Septhemba 25, 2014 NgoLwesithathu, Septemba 24, 2014 Douglas Karr
Ukuthuthukisa nokufaka izicelo zeselula kungaba yinqubo eyisicefe, edla izinsiza nezikhungathekisayo ezinkampanini. Ukuthola imvume ku-App Store kwesinye isikhathi kungaba usizo, ungalokothi ukhathalele ukusebenzisa uhlelo lwakho lokusebenza lweselula. Futhi uma uthola ukuthi kunamathuba wokuthuthukisa noma wokwenza kube ngokwakho uhlelo lokusebenza, ngokujwayelekile lisho ukuthuthukiswa okwengeziwe nokukhululwa okusha. Kukhona ezinye izindlela ngaphandle, noma kunjalo.
I-Leanplum isisombululo sokwenza kahle okuhlanganiswe ngokuphelele kwezinhlelo zokusebenza zeselula ukusiza izinkampani ekuthumeleni izinhlelo zokusebenza zeselula lapho zingavivinya khona, zihlaziye, zihlelile futhi zenze ngokwezifiso ulwazi lomsebenzisi nokuthumela imiyalezo.
Leanplum Ipulatifomu ivumela ukwenza ngezifiso, ukuhlolwa kanye nokwenza ngcono
Ukuhlolwa kohlelo lokusebenza lweselula lwe-A / B - Okuqukethwe kokuhlola, imikhankaso yemiyalezo, izinto ezibukwayo, ne-UI endizeni ukuze kuthuthukiswe umuzwa womsebenzisi weselula ngokuhlolwa kwesikhathi sangempela okungadingi ukuthunyelwa kabusha kwe-App Store. Umsebenzisi angafaka ukuhlolwa kwizigaba zamakhasimende nokuhlolwa kwe-A / B okubhekiswe kokuma kwezwe, uhlobo lwedivayisi, uhlobo lohlelo lokusebenza, umthombo wethrafikhi, izimfanelo zamakhasimende, izintshisekelo, okuncamelayo nokuziphatha okungaphakathi nohlelo.
Ukuphathwa kokuqukethwe kweselula - Yenza ngezifiso futhi ushicilele okuqukethwe kweselula ngamandla ngokuya ngokuziphatha, ukubalwa kwabantu, indawo nezinye izimfanelo. Vumelanisa, gcina, uphinde usebenzise izimpahla zeselula ngesikhathi sangempela, ngokuvikela okuhlanganisiwe, ukuvumelanisa, nokusekelwa okungaxhunyiwe ku-inthanethi. Khipha izici ezintsha ngaphandle kwesidingo sokuphinda uthumele ku-App store nakumtapo wezincwadi ohlanganisiwe. Lokhu kufaka phakathi i-API yemodeli yedatha eguquguqukayo.
Imishini Yokumaketha Yeselula - Dala, wenze, futhi uhlole imilayezo engaphakathi nohlelo ekhonjisiwe yeselula bese ucindezela izaziso ukukhulisa ukuzibandakanya komsebenzisi, ukugcinwa kanye nokwethembeka komkhiqizo. Ngokuhambisana nokuhlolwa kwe-A / B kokuthumela imiyalezo, ungabuyekeza imilayezo futhi uqalise imikhankaso ngesikhathi sangempela, noma udale izimbangela ezithile ezenzelwe isikhathi nemicimbi.
Izibalo zohlelo lokusebenza lweselula - hlaziya idatha ngokususelwa ekuziphatheni kwangaphambilini, uhlobo lwedivayisi, i-geography, umthombo wethrafikhi, nezimpawu zomsebenzisi zangokwezifiso. Dala imijondolo yokuguqula, isegmenti ngokuya ngokuziphatha noma isikhathi, futhi ubuke amamethrikhi ajwayelekile.
Tags: isikhumbauhlelo lokusebenza lweselula ab ukuhlolwaizibalo zohlelo lokusebenza lweselulauhlelo lokusebenza lweselula lokuhlaziya ama-funnelsizibalo zokuziphatha zohlelo lokusebenza lweselulaimikhankaso yohlelo lokusebenza lweselulaUkusebenza kokuqukethwe kokusebenza kweselulauhlelo lokusebenza lweselula okuqukethwe okunamandlauhlelo lokusebenza lweselula ukukhonjwa kwendawouhlelo lokusebenza lweselula lokuzenzekelayoimiyalezo yohlelo lokusebenza lweselulaamamethrikhi wohlelo lokusebenza lweselulaUkusebenza kohlelo lokusebenza lweselulauhlelo lokusebenza lweselula okuqukethwe okwenzelwe wenauhlelo lokusebenza lweselula ukuhlolwa kwesikhathi sangempelaUkuhanjiswa kabusha kohlelo lokusebenza lweselulaukuhlukaniswa kohlelo lokusebenza lweselulaukukhonjwa kohlelo lokusebenza lweselulaukuhlolwa kohlelo lokusebenza lweselulauhlelo lokusebenza lweselula lubangele imilayezoukuhlolwa kweselula
I-SDL: Yabelana Ngemilayezo Ehlanganisiwe Namakhasimende Akho Omhlaba Wonke